अहिले सम्मकै सर्वाधिक नाफा कमाउने फिल्महरुFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
अहिले सम्मकै सर्वाधिक नाफा कमाउने फिल्महरु
फिल्मी फण्डा । बलिउडमा धेरै बक्स अफिसको न्यूजहरु आउने गर्दछ । बलिउड फिल्महरु मध्ये अहिले सम्मको सर्वाधिक नाफा कमाउने पहिलो फिल्म बलिउड चलचित्र बाहुबलि २ हो । यस फिल्मले लाइफटाइम कलेक्सन ५ सय ११ करोड ३० लाख रहेको थियो ।
कुल ९० करोड लागत परेको उक्त फिल्मले कुल लागतको ४ सय ६८ प्रतिशत नाफा कमाएको थियो । यस्तै गरी दोश्रो स्थानमा अक्ष्य कुमार स्टारर फिल्म ट्वाइलेट एक प्रेम कहानीले ४ सय ५६ प्रतिशत नाफा कमाएको थियो भने फिल्मको कुल खर्च २४ करोड रहेको थियो ।
उक्त फिल्मले १ सय ३३ करोड ६० लाख कलेक्सन गरेको हो भने तेश्रो नम्बरमा रहेको फिल्म ‘हिन्दी मेडियम’ २२ करोडमा बनेको थियो भने फिल्मले ६९ करोड विजनेस गरेको थियो । यस्तै चौथो नम्बरमा जोली एल. एल. बि रहेको छ । उक्त फिल्मले ४५ करोड लागतको १ सय ६० प्रतिशत धेरै कमाएको थियो ।
र पाचौँ नम्बरमा फिल्म बद«ीनाथ की दूल्हनीया रहेको छ । यस फिल्मले लागतको १ सय ५९ प्रतिशत नाफा गरेको थियो ।
Top 12 films :